Ny Iranianina dia vahoaka miteny persana, kiorda, tajiky, pastô, ôsetiana, balotsy, ary zazaky mipetraka any Azia Andrefana. 130 tapitrisa eo ho eo no isany manerana izao tontolo izao. Ny fiteny iranianina dia fiteny ao amin' ny vondrona indô-eorôpeanina, izay vondrona misy koa ny fiteny eorôpeanina (frantsay, anglisy, rosiana, soedoà, alemana, italianina) sy ny fiteny indianina (hindy, ordo, bengaly).
Ny vahoaka iraniana taloha dia nipoitra tamin' ny taonarivo voalohany tal. J.K., ka isan' izany ny Alàna, ny Baktriana, ny Daha, ny Koarezmiana, ny Masageta, Meda (na Mediana), Partiana, Persiana, Sagartiana, Saka, Sarmatiana, Skitiana (na Sita), Sôgdiana, ary angamba ny Kimeriana (na Simeriana).
1.2.9 Ny Iagnôby
Vahoaka iraniana tamin' ny Andro TalohaHanova
Vahoaka iraniana ankehitrinyHanova
Ny Pastona dia vahoaka iraniana miteny pastô indrindra. Tamin' ny taona 2009 izy ireo dia niisa 50 000 000 any ho any, fa ankehitriny kosa ia eo anelanelan'ny 60 000 000 sy 70 000 000. Ny vahoaka pastona no nanorina an' i Afganistana nefa any Pakistana no ahitana azy ireo betsaka, indrindra ao amin' ny faritanin' i Khyber Pakhtunkhwa. Miteny pastona, hindo, ordo ary persana ny Pastona.
Ny Korda dia vahoaka miteny indô-eorôpeana, isan' ny vahoaka iraniana, izay miisa eo anelanelan' ny 30 000 000 sy 40 000 000, monina indrindraindrindra ao Torkia sy ao Iràna sy ao Iràka ary ao Siria. Nisy ny fifindra-monina vao tsy ela izay niteraka ny zanaka am-pielezana (diaspôra) korda miely amin' ny firenena rehetra any Eorôpa Andrefana sy any Etazonia ary any Aostralia. Miteny amin' ny fitenim-paritra maro mitovitovy ny Korda, dia fiteny avy amin' ny fiteny korda. Ny Korda ao Kordistàna Atsimo sy Atsinana dia miteny sôrany (sorani), ny ao amin' ny tapany efatra hafa dia miteny kormanjy (kurmandji), ny ao Kordistàna Avaratra miteny zazaky. Misy fitenim-paritra hafa koa izay tenenina ao amin' ireo faritra maro ao Kordistàna toy ny fiteny lôry, ny fiteny laky, ny fiteny gôrany, sns.
Ny Gilaky dia vahoaka monina ao amin' ny tapany avaratr' i Iràna, ao amin' ny faritanin' i Gilan. Izy ireo no vondrom-poko lehibe ao amin' io faritra avaratr 'i Iràna io. Ny Gilaky dia ampahan' ny vahoaka kaspiana ihany, izay monina ao amin' ny faritra atsimo sy atsimo-atsinanan' ny morontsiraky ny Ranomasina Kaspiana. Ny vahoaka gilaky dia tombanana any amin' ny 3 000 000 sy 4 000 000 tamin' ny taona 2006.
Ny Ôsetiana dia vahoaka monina ao amin' ny faritr' i Kaokazy, any Rosia ary any Jeôrjia, avy amin' ny faritra atao hoe Ôsetia. Miisa any amin'ny 750 000 any ho any ny Ôsetiana ka ao Rosia (528 515 tamin' ny taona 2010), ao Ôsetia an' i Alania Avaratra (445 310 tamin' ny taona 2010), ao Ôsetia Atsimo (45 000 tamin' ny taona 2007), ao Jeôrjia (38 028 tamin' ny taona 2002), ao Torkia (100 000) ary ao Siria (61 800) no tena betsaka azy ireo.
Ny Parsỳ dia vahoaka zôrôastriana nifindra monina any India noho ny fanenjehan' ny Miozolmana azy ireo, mba hahafahan' izy ireo manohy ny fanarahany ny fivavahany. Tamin' ny taona 2012 dia miisa eo anelanelan' ny 111 700 sy 121 700 ny Parsỳ maneran-tany, ka 61 000 ny tao India, teo anelanelan' ny 15 000 sy 25 000 ny tao Iràna ary 14 405 ny tany Etazonia.
Ny fivavahana iranianaHanova
Fivavahan' ny vahoaka iraniana tamin' ny Andro Taloha:Hanova
Fivavahan' ny vahoaka iraniana tamin' ny Andro Antenatenany sy ankehitrinyHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Iranianina_(vahoaka)&oldid=1043827"
Dernière modification le 11 Febroary 2022, à 09:45
Voaova farany tamin'ny 11 Febroary 2022 amin'ny 09:45 ity pejy ity.